More than 500 killed and thousands arrested in Ethiopia/Oromia – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsMore than 500 killed and thousands arrested in Ethiopia/Oromia
More than 500 killed and thousands arrested in Ethiopia/Oromia
Murtii Qeerroo malee mana murtii nafxanyaatirraa haqa hin eegnu.
Mootummaan kuni hagam akka nu madaalaa jiru Hubadhaa. Innis Jawaar duukaa qeerroon dhuguma Isa jaalataa? Isa deeggaraa Kan jedhuudha. Kanaafis immoo tarkaanfii guyyoottan darban raawwataman qabbaneessine qeerronis manatti gale jedhanii waan amananiif beellama hayyoota keenyaa achii siiqsaa jiru.
Garuu biyya keessatti qeerroon osoo dhiibbaa hamaa tarkaanfii lagannaa dabalatee hiriira guddaa addaan hin citne taasifamee Mootummaan kuni naasun Jawaar fa’a gadhiisuu Mala. Amma Garuu calliseetuma nu ilaalaa nu madaalaa jira. uummanni aarii hin qabu hidhamuu Jawaarittis hagas hin gaddine kanaaf mana hidhaa Isa deddeebisna jedhee dhaadachuu mala.
Kanaaf yaa Qeerroo yaa Oromoo yoo ati dhuguma Jawaarif baqqalaa fa’adhaf deeggarsaaf jaalala qabaatta ta’e ka’i bakka jirtuu qeerroon fincili.
– karaa cufi
– haga guyyaa beellama Jawaar fa’a geejjiba dhaabsisaa
– gabaa lagadhaa
Teenye Kan mana murtii eegnu qofa taanan booda dhiiga bo’uuf taana. Hayyoota aktiiviistii warri jedhamtan kanneen teessoon keessan Ameerikaaf Awurooppaa taatan uummata kakaasaa. tarsiimoo dur Jawaar waliin dalagdaniin sana qeerroo biyyaatti bilbilaan dhaamaa uummanni haa fincilu.
Yaa Oromoo yeroon yeroo itti dhaaban wal hirruu miti yeroon yeroo itti ajaja nama kanaa nama Sanaa qofa dhageenyee qabsoofnuu miti. yeroon yeroo itti kiyyatu ta’aa kee hin ta’u waliin jennuu miti. waan ta’aa jiru hunduu ija isaatin argaa jira. kanaaf gahee kee bahi. akkuma hawaasni Oromoo biyya alaa bakkuma jirutti dhiibbaa uumuutti jiru kana biyyattis bilbilanii sochiin warraaqsaa daraan akka cimu taasifamuu qaba.
Sila teenyee tisiisarraa damma eegnaa?
Af Gaaffii Jaal Marroon Radioni VOA Afaan Amaaraa Waliin godhe dhaggeeyfadhaa.
Jaal Marroo Lollis Dubbiinis irraa bareeddi baga siqabaanne dhiiroo.
አዲስ አበባ፣ ሐምሌ 9፣ 2012 (ኤፍ.ቢ.ሲ) የአርቲስት ሀጫሉ ግድያን ተከትሎ አስክሬን በመቀማት እና ሁከት በመፍጠር ወንጀል የተጠረጠሩት አቶ ጃዋር መሃመድና አቶ በቀለ ገርባን ጨምሮ ሌሎች ግለሰቦች ፍርድ ቤት ቀርበዋል።
Dubbii Jabduu, Ministira Muummee Itiyoophiyaa Dr. Abiyyi Ahimad waliin turtii OBN godhe
Gurbaa Kijibaa kana dhaggeeffadhaamee Waggaa tokko dura Gaafa Noobeelii Fudhate Miidiyaa Adduunyaa Fuunduratti Haadhikoo Amaara Jechaa ture”Hardhammoo Deebisee Haatikoos Abbeenkoos Oromoodha nuun jedha!
More than 500 killed and thousands arrested in Ethiopia in the last two weeks……
‘Baga Oromoon ajjeefame, Oromoo cunqursani bulchuun sirriidha; Oromoon genocide nutti geggeessaa jira’ jette Nafxanyaan hiriira bahaa jirti diyaasporaatti. OMN kanas agarsiisu qaba. Nafxanyaan yeroo Oromoon ajjeefamu akkamitti akka gammadan sirrittii ummata keenyaaf agarsiisu qaba. Nafxanyaan baate ‘Oromoo ajjeessun sirriidha’ jechuun ishii qabsoo keenyaaf guuzadha. Oromoon diina isaa ni beeka garuu diina fira fakkaate si rukutu kan afaan Oromoo hasawuutu rakkiisaadha, diinni kan akka Nafxanyaa ifa bahe ‘siin ajjeessa’ jedhu ofirraa dhowwuun salphaadha.
Finfinneetti kunoo akkanatti raayyaan ittisa biyyaa uummata..